သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် အသက် ၁၂ နှစ်အထက် ကလေးများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းစတင်မည် - Xinhua News Agency
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် အသက် ၁၂ နှစ်အထက် ကလေးများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းစတင်မည်
Canton Fair က တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် တံခါးဖွင့်စီးပွားရေး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာအသစ်များအဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြနေ
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဘဏ်ကတ် စုစုပေါင်း ၈ ဒသမ ၉၈ ဘီလီယံ ထုတ်ဝေထား
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပြည်ပခရီးသွားများအတွက် ကွာရန်တင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖြေလျှော့ပေးရန်ရှိ
သမင် ပြပွဲ (သို့မဟုတ်) ဒါဟာ ရိုးရိုးတုပ်ကွေးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အက်ထရာခန်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် လူ ၅ ဦး သေဆုံး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကီရာလာပြည်နယ်၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် လူ ၂၆ ဦး သေဆုံးကာ အများအပြား ပျောက်ဆုံးနေ
နေတိုးဆိုင်ရာ ရုရှားရုံးနှင့် ရုရှားအခြေစိုက် နေတိုးသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏အလုပ် ခေတ္တရပ်နားမည်ဟု ရုရှား ကြေညာ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ၂ ခု ပစ်ခတ်ခဲ့ဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ ပြောကြား
COVID-19 UPDATES WORLD မြန်မာ-ENG
အမေရိကန်နိုင်ငံ အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီးတွင် COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိ
INTERNATIONAL ORGANIZATION International Organizations မြန်မာ-ENG
အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ COVID-19 Delta ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် "AY4.2" ပထမဆုံးတွေ့ရှိ
CHINA COVID-19 UPDATES မြန်မာ-ENG
တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်နယ်အဆင့် ဒေသ ၄ ခုသို့ COVID-19 အလုပ်အဖွဲ့များ စေလွှတ်
COVID-19 UPDATES Media PHOTO Photos
ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အသက်၁၂နှစ်မှ ၁၈ နှစ် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းသား/သူများအား တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အစီအစဉ်အရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အ.ထ.က (၁) ကျောင်းတွင် တရုတ်ဆေးဝါကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် Sinovac ကာကွယ်ဆေးအား အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင် ကလေးများကို ထိုးနှံပေးနေသည့်မြင်ကွင်းများအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး စတုတ္ထအသုတ် အီရတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ
ASEAN COVID-19 UPDATES မြန်မာ-ENG
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာလမှစ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ပြန်လည်ဖွင့်ပေးမည်
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့တွင် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို၊ ဩဂုတ် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အစိုးရသည် အသက် ၁၂ နှစ်အထက်ကလေးများအား တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ် Mahinda Rajapaksa က ပြောကြားထားကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာက ဩဂုတ် ၁၆ ရက်၌ သတင်းဖော်ပြထားသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုများစွာဖြင့် ကလေးငယ်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အစီအစဉ်တွင် ဦးစားပေးထားရှိကြောင်း Rajapaksa က ပြောခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် အစိုးရအနေဖြင့် အသက် ၃၀ နှစ်အထက် နိုင်ငံသားများအားလုံးကို နိုင်ငံတစ်ဝန်း အသုံးပြုလျက်ရှိသော ကာကွယ်ဆေးများအနက် ဦးဆောင်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးဖြင့် ထိုးနှံလျက်ရှိကြောင်း၊ အခြားကာကွယ်ဆေးများမှာ AstraZeneca ၊ Pfizer ၊ Sputnik V နှင့် Moderna ကာကွယ်ဆေးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအချိန်အထိ အသက် ၃၀ နှစ် အထက် လူဦးရေ ၁၁ သန်းကျော်ကို ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းတို့အနက် လူပေါင်း ၃,၆၉၈,၃၀၃ ဦးမှာ ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Sri Lanka to begin vaccinating children above 12 against COVID-19
Source: Xinhua| 2021-08-16 23:33:54|Editor: huaxia
COLOMBO, Aug. 16 (Xinhua) — Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa said the Sri Lankan government has planned to vaccinate children over 12 years old against the COVID-19 step by step, local media reported Monday.
Rajapaksa said children with various complications will be given priority in the vaccination program.
Presently the government is vaccinating all citizens above the age of 30 years against the COVID-19 with China’s Sinopharm vaccine being the leading vaccine administered across the country. Others are AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines.
Sri Lanka has to date administered over 11 million doses of first dose vaccines on those above 30 years old and 3,698,303 second doses were administered. Enditem
Photo : A woman receives the Sinopharm COVID-19 vaccine in Colombo, Sri Lanka, on Aug. 7, 2021. Sri Lanka is in the midst ofathird wave of the COVID-19 pandemic with medical officials warning that the Delta Variant may be spreading beyond control. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)
Related Topics:ChildrenCOVID_19Sri LankavaccinationXinhuamyanmarကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းသီရိလင်္ကာ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစက်ရုံ တည်ဆောက်မည်
စပိန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ ယခုနှစ်၏ အကြီးဆုံးတောမီး ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိ